लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन काजाक काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तोक पिसिन तोजोलबल त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मबुन्डा मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिजो म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
मलाई मण्डलीका जवानहरूसँग समय बिताउन मन पर्छ
स्यामुएल ह्यामिल्टनको वृतान्तमा आधारित
जन्म मिति: सन्‌ १९२८
जन्म स्थान: कोस्टा रिका
विगतमा: व्यावसायिक खेल र जुवामा लग्गू
म कोस्टा रिकाको पूर्वीय तटमा पर्ने बन्दरगाह सहर, पोर्टो लिमनमा हुर्किएँ। आठ सन्तानमध्ये म सातौं थिएँ। म आठ वर्षको छँदा मेरो बुबा बित्नुभयो। त्यसपछि आमा एक्लैले हामीलाई हुर्काउनुभयो।
बेसबल मेरो जीवनको अभिन्न भाग थियो। सानो छँदादेखि नै मलाई यो खेल मन पर्थ्यो। किशोर छँदा मैले सोखको लागि मात्र खेल्ने एउटा लिग टिममा भाग लिएँ। बीस वर्ष हुँदातिरको कुरा हो, खेल हेर्न आएका एक व्यक्तिले मलाई निकारागुआको व्यावसायिक टिममा खेल्न निम्तो दिए। तर त्यतिबेला मेरी आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको हेरचाह गर्नुपर्ने भएकोले म निकारागुआ जान चाहन्नथें। त्यसैले मैले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरें। पछि अर्को एक व्यक्तिले मलाई कोस्टा रिकाको राष्ट्रिय बेसबल टिममा खेल्न निम्तो दिए। यो टिममा सोखको लागि खेल्ने लिगका केही खेलाडीहरूलाई समावेश गरिएको थियो। यसपालि भने मैले प्रस्ताव स्वीकारें। म सन्‌ १९४९-१९५२ सम्म राष्ट्रिय टिममा थिएँ। अनि मैले क्युबा, मेक्सिको र निकारागुआमा दर्जनौं खेल खेलें। बेसबल खेल्दा बेसम्यानको रूपमा राम्रोसँग खेल्दै थिएँ। यहाँसम्म कि १७ वटा खेल त कुनै गल्ती नगरी खेलेको थिएँ। खेल खेलिरहेको बेला मानिसहरूले मेरो नामको जयजयकार गाउँदा एकदमै खुसी लाग्थ्यो।
तर दुःखको कुरा, म अनैतिक जीवन बिताउँदै थिएँ। हुन त मेरी प्रेमिका एउटी मात्र थिइन्‌ तर म अरू केटीहरूसँग पनि लागेको थिएँ। म अचाक्ली रक्सी पिउँथें। एकचोटि त यति धेरै पिएँ, भोलिपल्ट होस खुल्दा म कसरी घर फर्कें केही याद थिएन। म जुवा पनि खेल्थें।
मैले यसरी नै जीवन बिताइरहेको बेला मेरी आमा यहोवाको साक्षी हुनुभयो। मैले पनि उहाँको धर्म अङ्‌गालोस् भनेर उहाँले निकै कोसिस गर्नुभयो तर सुरुमा सफल हुनुभएन। त्यतिबेला म खेलको संसारमै डुबिरहेको थिएँ। प्रशिक्षणको दौडान खाना खाने समयमा समेत भोक लाग्दैनथ्यो। मेरो ध्यान खेलमै मात्र केन्द्रित थियो। म बेसबलविना बाँच्नै सक्दिनथें!
तर २९ वर्षको हुँदा खेलमा बल समात्ने क्रममा मलाई गम्भीर चोट लाग्यो। निको भएपछि मैले व्यावसायिक खेल छोडिदिएँ। तैपनि म बेसबलमा आबद्ध भइरहें। म सोखका लागि खेल्ने लिग टिमका खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिन्थें। त्यो टिम मेरो घरनजिकै थियो।
सन्‌ १९५७ मा यहोवाका साक्षीहरूले आयोजना गरेको अधिवेशनको निम्तो स्वीकारें। उक्त कार्यक्रम पहिला मैले बेसबल खेल्ने गरेको रङ्‌गशालामै हुन लागेको थियो। कार्यक्रमको दौडान मैले एउटा कुरा याद गरें। बेसबल हेर्न आएका दर्शकहरूको जङ्‌गली व्यवहार र यहोवाका साक्षीहरूले देखाएको आदरपूर्ण व्यवहारमा ठूलो भिन्नता थियो। अधिवेशनमा देखेको कुराले मन छोएकोले मैले साक्षीहरूसँग बाइबल अध्ययन सुरु गरें अनि उनीहरूको सभामा पनि उपस्थित हुन थालें।
मलाई बाइबलका शिक्षाहरू मन पर्थ्यो। उदाहरणका लागि, अन्तको दिनमा आफ्ना चेलाहरूले राज्यको सुसमाचार संसारभरि प्रचार गर्ने कुराबारे येशूले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। (मत्ती २४:१४) साँचो ख्रीष्टियनहरूले आर्थिक लाभको लागि प्रचार गर्दैनन्‌ भन्ने कुरा पनि बुझें। येशूले यसो भन्नुभएको थियो: “तिमीहरूले सित्तैंमा पायौ, सित्तैंमा देओ।”—मत्ती १०:८.
अध्ययन गर्दै जाँदा, बाइबलबाट मैले सिकेको कुरा र यहोवाका साक्षीहरूको व्यवहारबीच तुलना गरें। उनीहरूले राज्यको सुसमाचार सारा संसारभरि फैलाउन गरेको कडा मेहनत देखेर मनै छोयो। येशूले ख्रीष्टियनहरूलाई सिकाउनुभएजस्तै उनीहरूमा दिने मनोवृत्ति थियो। त्यसैले मर्कूस १०:२१ मा येशूले “आएर मेरो पछि लाग” भनेर दिनुभएको निम्तो पढ्‌दा मेरो मनमा पनि साक्षी बन्ने चाहना पलायो।
तर बाइबलको सल्लाह राम्ररी पालन गर्न मलाई अलि समय लाग्यो। उदाहरणको लागि, लामो समयसम्म हरेक हप्ता चिट्ठामा मेरो “भाग्यशाली” नम्बरमा बाजी लगाउँथें। तर “भाग्यदेव”-को उपासकहरू र लालचीहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको कुरा थाह पाएँ। (यशैया ६५:११; कलस्सी ३:५) त्यसैले जुवा खेल्न बन्द गर्ने निर्णय गरें। मैले खेल्न छोडेको पहिलो हप्तामै मेरो “भाग्यशाली” नम्बरमा चिट्ठा परेछ! त्यो हप्ता चिट्ठामा भाग नलिएकोले मानिसहरूले मलाई खुब गिज्याए अनि फेरि खेल्न दबाब दिए। तर मैले त्यसो गरिनँ। मैले फेरि कहिल्यै जुवामा भाग लिइनँ।
यहोवाका साक्षीहरूको अधिवेशनमा बप्तिस्मा गरेकै दिन मैले “नयाँ व्यक्तित्व” धारण गर्ने सन्दर्भमा अर्को चुनौती पनि सामना गर्नुपऱ्यो। (एफिसी ४:२४) त्यस साँझ म आफू बसेको होटेलमा फर्कंदै थिएँ, त्यहाँ मेरी पूर्व प्रेमिका ढोकाबाहिर मलाई कुरिरहेकी थिइन्‌। उनले मलाई “आऊ, हामी रमाइलो गरौं!” भनिन्‌। मैले “नाइँ” भनेर जवाफ दिएँ। आफूले बाइबलको नैतिक स्तरअनुरूप जीवन बिताइरहेको कुरा उनलाई सम्झाएँ। (१ कोरिन्थी ६:१८) उनले रिसाउँदै भनिन्‌, “के रे?” त्यसपछि अवैध यौनसम्बन्धबारे बाइबलको दृष्टिकोणलाई हल्कासँग लिंदै उनले फेरि सम्बन्ध अघि बढाउन कर गरिन्‌। तर म भने खुरुक्क आफ्नो कोठामा छिरें अनि ढोका बन्द गरेर बसें। सन्‌ १९५८ मा साक्षी भएदेखि यता आफ्नो जीवनशैलीमा थुप्रै परिवर्तन गर्न सकेकोमा म एकदमै खुसी छु।
बाइबलका निर्देशनहरू पालन गर्दा मैले पाएका फाइदाहरूबारे एउटा किताबै लेख्न सक्छु जस्तो लाग्छ! तीमध्ये केहीलाई विचार गर्ने हो भने अहिले मसँग असल साथीहरू छन्‌, मेरो जीवन अर्थपूर्ण भएको छ अनि मैले साँचो आनन्द पाएको छु।
हुन त बेसबल अहिले पनि मन पर्छ तर त्यसप्रतिको दृष्टिकोण भने परिवर्तन गरेको छु। बेसबल खेल्दा मैले नाम र दाम दुवै कमाएको थिएँ तर ती कुराहरू क्षणिक मात्र थिए। परमेश्वरसितको मेरो सम्बन्ध र मैले पाएको विश्वव्यापी भ्रातृत्व भने सधैंभरि रहिरहने कुरा हो। बाइबल भन्छ: “संसार बितेर जाँदैछ र त्यसको अभिलाषा पनि, तर जसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ, ऊ सधैंभरि रहिरहन्छ।” (१ यूहन्ना २:१७) अहिले म यहोवा परमेश्वर र उहाँका जनहरूलाई असाध्यै माया गर्छु। उहाँहरूविना म बाँच्नै सक्दिनँ!
हामीलाई किन डोऱ्‍याइ चाहिन्छ र कुन दुई वटा आज्ञा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्‌, येसुले बताउनुभयो।